အလင်းဆက် ကျိုက်ထီးရိုးသွားတုန်းက…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » အလင်းဆက် ကျိုက်ထီးရိုးသွားတုန်းက….	21
Posted by Thint Aye Yeik on May 4, 2012 in Arts & Humanities, My Dear Diary, Photography | 21 comments
တစ်ညလုံး မအိပ်ပဲ.တက်လာခဲ့ရတဲ့အမောတွေ.ပြေသွားစေတဲ့ ဘုရားပုံလေးပါ ။
အဲ.ပုံတွေက ဆိုဒ်ကြီးနေတယ်.နော် ။
အလင်းဆက်…ဆိုတာ..ချောတဲ့ ဖြောင့်တဲ့ ကောင်လေးလို့ ထင်နေသူများ.အတွက် ၀က်ဝက်ကွဲအောင်လွဲမယ့် ပုံပါ။ အမြဲတမ်း မှုန်ကုပ်ကုပ်.နေလေ့ရှိတဲ့အလင်းဆက်ပါ ။
ပုံတွေ.က အများကြီးပါ ။ အင်တာနက် လိုင်းတွေ က မကောင်းတော့ ..ပုံတွေ.တင်ရတာ တော်တော် ခက်နေပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ဒီလောက်ပဲ.တင်ခဲ့ပါတယ် ။ နောက်များမှ ပဲ.ထပ် ဖြည့်ပါတော့မယ် ။
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပေါ်မှာ..သကြီန်တွင်း ပိတ်ရက် ဆိုတော့ လူတော်တော်များပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ လည်း ရေတွေ.စိုလိုက် .ပြန်ခြောက်လိုက်နဲ့ ..
နောက်နှစ်လည်း…ဘုရားပေါ် တက်ချင်ပါသေးတယ် .။
အလင်ဆက် About Thint Aye Yeik
ဗိုက်ကလေး says: ဟားဗျာ..
အူလေးမှာ ဂစ်တာကော ဘော်ဒါကော တယ်ဟုတ်ပါလား..
အူးလေးနဲ့ရွာက MG Band နဲ့ချိတ်မိရင် ပွဲစည်ပြီဗျာ
အလင်းဆက် says: အဟဲ..ဘော်ဒါက…ဘော်ဒါပါပဲ.။ တခြားသူငယ်ချင်းတွေလည်းပါတယ်ဗျ ။
ဂေဇက် တီးဝိုင်းနဲ့ ချိတ်မိရင် ပျော်စရာကြီးနော် ။
ပုံတွေက အများကြီးပဲ.။ တင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ ကြာပြီ။ မီးပျက်တဲ ဒဏ် ၊ လိုင်းမကောင်းတဲ့ ဒဏ်တွေက်ိုေ တ်ာတော်လေး.ခံလိုက်ရတယ် ။ အခုတောင် တစ်ပုံချင်းစီ.တင်နေရတာလေ ။
အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ says: ကိုအလင်းဆက်ရေ. သူငယ်ချင်းနော် ဟုတ်ပါတယ်နော်။
သက်သက် ခင်လို့ စတာပါဗျ။ကျိုက်ထီးရိုးရောက်ဖူးချင်လာပီ။
may flowers says: ကြည့်ရှုအားပေးသွားပါတယ်။
AKKO says: အားပါးပါး ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကြီး သပ္ပါယ်လိုက်တာ အရမ်းပဲ ။
ညဘက်ဒီပို့စ်ကိုဖတ်မိတော့ ကျိုက်ထီးရိုးတကယ်ရောက်သွားသလို ခံစားရပါတယ် ။ တစ်ယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးလေ ဟဲဟဲ ဘရာကြော်ပါ အလင်းဆက်ရေ ရွာထဲမှာ ကိုယ့်ပုံကိုယ်တင်ရဲတာ ပထမဆုံးပါပဲ ။ တခြားလူတွေက ပထမအကြိမ် အလှူပုံ ဦးဖက်တီး လက်စွမ်းပြလိုက်လို့ ကိုယ်ရောင်ပြလာကြတာ ။ အခုတော့လည်း ကလောင်နာမည်တစ်ခုနဲ့ ပုန်းလျိုးကွယ်လျိုးမဟုတ်တော့ဘူး ရပ်သိရွာသိကို ပုံတွေတင်ရဲလာကြပြီ ။
windtalker says: တော်တော်ပြောင်ကြောင်း မန့်ခဲ့၏
ကျန်တာ ဒေါ်ဒေါ်ကြောင် လာမှ ဆက်ရှင်း
Mလုလင် says: ဒီနေ့ ပြိုင်ပွဲမှာ ကျိုက်ထီးရိုး night scence က Final Choice အထိ ပါခဲ့တယ်ဗျာ … ခု M.G ၀င်ကြည့်တော့ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားပုံ တွေ့တယ်။ ဖမ်းစားနိုင်လွန်း အားကြီးတယ်ဗျို့  ….။
Khin Latt says: ဘုရားဖူးဖွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ။
ဒါထက် ဂစ်တာကြီး က မင်းကိုယ်ပိုင်လား?
kyeemite says: အလင်းဆက်
အပျင်းမဖက် တင်ပေးတဲ့ပုံလေးတွေ ကြည့်ကောင်းပါဂျောင်း..
ကျုပ်လည်း “ဂီတာတစ်လက် အရက်ကတစည် မိန်းမလှလေးကတစ်ယောက်“
ကြောင်ကြီး says: လည်စင်းပေးပါဒယ်
ဒက်ကလုပ် ဒက်ကလုပ် ဒက်ကလုပ်…
Thint Aye Yeik says: အဲ့ထဲက ဦးကြောင်က
water-melon says: သူငယ်ချင်းလို့ပြောပေမဲ့
အဟိ ဒူ တန့် တန့်
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အယ် ..
သူ့ဝေဒနာ ဒီနေရာမှာ လာပြသွားဒေးဒယ် ..
တူနယ်ချင်းလေး ချိုတာ ဂယ်ကော ဟုတ်လို့လားဟင် …. :D
အလင်းဆက် says: အရိးလတ်ရေ..ဂစ်တာက ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းရဲ့ ဂစ်တာပါ ။နောက်ပြီး.ဆိုတဲ့ …ဟာကလည်းကျွန်တော် မပိုင်သေးပါဘူးဗျ။
ဖရဲ.ရေ..ကျွန်တော်နဲ့ သူ့ကိုတော့ သူငယ်ချင်းလေး အဖြစ်ပဲ.ထားပါနော် ။ ခိုးမချစ်ပါဘူး။ အဲ..သူငယ်ချင်းကို
အံစာတုံးလေးရေ…သူငယ်ချင်းလေးက ဂယ့် သူငယ်ချင်းရေးပါဂျ ။
သားက အခုမှ ကလေးပဲ.ရှိသေးတာ ။
ကလေးမို့ သာ..ကိုယ့်ရုပ်ဆိုးဆိုးကို မရှက်ပဲ.တင်လိုက်တာပေါ့နော် ။ အဟိ ။
Inz@ghi says: ဟာဂျာ …
ကဗျာဆြာ ရာ ..
ဘေးက အိုဗေးရှင်း ဂစ်တာဂျီး နဲ့ အပီချုပ်ခဲ့ရမှာဗျာ…
ဟို သူငယ်ချင်းရဲ့ ဂီတာနဲ့ ဒီသူငယ်ချင်းမလေးကို
ချစ်ချစ် အဖြစ် ဗားရှင်းအပ်ပ် လုပ်ပစ်ရမှာ …ဂယ်ပဲ…
ရွာ့ တီးဝိုင်းကလူတွေနဲ့များ ကွာပ …
ဆူး says: အလင်းစက်ရေ ပုံလေး တော့ မြင်ဖူးသွားပါပြီနော်။
ကောင်မလေး နဲ့ ဆိုတော့ ခရီးကလေးက မောတော့ မောတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ မမောဘူး သီချင်းကလေးလိုများ ဖြစ်နေလားလို့ တွေးမိတယ်။
ညလေး အိတုံ says: ကြည့်၇ှအားပေးသွားပါ၏…………း)
အလင်းဆက် says: မမဆူးရေ… သူငယ်ချင်းလေးတွေ.ပါတော့ မောတော့မောတာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် ဖြူစင်တဲ့ သံယောဇဉ်တွေ.နဲ့ပျော်ကြ..ပါးကြရတော့ မမဆူးပြောသလို ပါပဲ.။မမောနိုင်ပါဘူးဗျာ.။
ကျွန်တော်..ဘုရားသွားရာ လမ်းတလျှောက်မှ. ရိုက်လာတဲ့ ပုံတွေ မနည်းပါဘူး။
တောင်ပေါ်နေ…မိသားစု ဘ၀တွေကိုလည်း.မေးသင့်တာမေးပြိး စပ်စု ခဲ့ပါသေးတယ် ။
အင်တာနက် လိုင်းတွေ မကောင်းသေးတာမို့အဲဒါတွေကိ်ု ဘယ်လိုမှ မတင်နိုင်သေးလို့ ပါ။
မကြာခင်…အမှတ်တရပုံရိပ်တွေ.နဲ့ခံစားမိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ထပ် တင်ပြချင်ပါသေးတယ် ။
manawphyulay says: ခုမှပဲ မင်းသားချော အလင်းဆက်ကို မြင်ဖူးတော့တယ်…. ဘုရားလည်းဖူးရင်း လိပ်ဥလည်း အဲ မှားလို့ ပုံတွေလည်း ကြည့်သွားပါတယ်….
moe minthar says: အလင်းဆက်ရေ………..
ဖရဲမပြောသလိုပဲ…သူငယ်ချင်းလို့ ပြောပေမဲ့ ………..
အလင်းဆက် says: ဂီ.တို့ ကမြှောက်ပေးနေတော့ကျွန်တော်တောင် သူငယ်ချင်းကို တစ်မျိုးတစ်ဖုံ…ပြောင်းပြီး..တွယ်တာချင်လာပြီ..နော် ။ ဒါပေမယ့် ဖြူစင်တဲ့ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်လေးက ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်..တင်တာ အဖွဲ့ လိုက်ပုံတွေ..ပါပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် … နက်..လိုင်းက…အ၀ီစိ..ရောက်အောင် ကျနေတော့.ပုံတစ်ပုံက ပျောက်သွားပြီး..
ထပ် တင်လို့ ကို မရတော့တာ ။
နောက်မှပဲ… နောက်ထပ် ပုံတွေ. ထက်တင်ဦးမယ် ။
မနော..ရေ.. မင်းသားချောက တကယ်ရော.ချောရဲ့ လား…။ ကျွန်တော့် အမေ ကပြောတာတော့ သားချောတဲ့။ အဟဲ။
မိုးမင်းသားရေ…. ဖရဲ ပြောသလို.တော့ မဟုတ်သေးပါဘုးးဗျ ။